Bhuku reBkkham rinowedzera simba pamutambo - TELES RELAY
HOME » SPORTS Bhuku reBkkham rinowedzera simba pamutambo
Bhuku reBeckham rinowana kukurudzira panhandare
Inter Miami CF akakunda imwe kukunda kwepamutemo, iyo inogona kupa imwe nzvimbo yepaiti purojekiti yekambani yekuvaka nhandare muguta reMiami.
Dare Repamusorosoro reFlorida rakaramba Ichishanu kukwidza zvivako zvemuzinda. Bruce Matheson, muridzi, nyaya kudare iri nhandare kuti kutengeswa pedyo Miami-Dade David Beckham vake basa vadyidzani munda 2,79 maeka yaiva Overtown Chikamu muguta vanofanira ngaawone makwikwi. Matheson akarasikirwa nekutongwa kwekutanga muna Gumiguru 2017, asi akaramba achiita nhamba dzakati kuti. Gore rapera, akanga azviratidza pamberi Florida Supreme Court mushure 3ème District Court of Appeal vakanga varamba kuedza kwake kumisa kutengeswa.
- MLS W2W4: Rooney akanga agadzirira kutora matanho maviri kuTexas
- Carlisle: Ndeipi chinhu chekupedzisira pamusoro peBikkham Club muMiami?
- Beckham inobatwa naJames Corden mu "kuzarurirwa kwechifananidzo"
Pakanga pasina pakarepo kutaura kubva Inter Miami pamusoro pechisarudzo. Nyika yacho yakawanikwa neMiami Properties LLC - imwe sangano rinodzorwa naBekkham nevashandi vayo - yemadhora emamiriyoni e9,015. Kuwana kwaiva chigamba chekupedzisira chaive neine maekare akawanda akadiwa pakuvakwa kwebhokisi rebhora.
Sezvo kutenga ichi, kuti Inter muridzi boka Miami kwave kuchiita kuchinja, nevatungamiriri MasTec, Jorge uye Jose Mas uye CEO pamusoro Softbank, Masayoshi. Anosangana neboka raBkkham naMarcelo Claure, sachigaro mukuru weSprint. Imwe hama dzaMas dzikauya, Inter Miami yakatarira panzvimbo yemitambo kubva munzvimbo yeWesttown kusvika kuMelreese Country Club.
Vavhoti rakabvuma referendum wokupedzisira November yaibvumira muGuta Miami kutanga kwakadzama pamusoro 99 - gore risi raizoita Inter Miami kuvaka nhandare 25 000 nzvimbo iri nzvimbo Melreese, uyewo kunze kwekamuri yehotera ye750 uye zvishoma nezvishoma 1 mamiriyoni mamita mazana ehofisi nzvimbo, nzvimbo dzekutengesa uye zvekutengesa. Vadzidzisi vakabvumiranawo kuti vabhadhara mari yepaki yeHCNUMX hectares pedyo nenhare.
Maererano newebsite yeMiami City, komisheni yeguta inofanira kusarudza vatariri vekunze kuti vaite hurukuro pamusoro peC23 May. vashandi vakatsunga, nhaurirano inogona kutanga kutonga.
Muna March, vatungamiri vemaguta veMiami vakabvumirana nekugadzirisa vachiti zvibvumirano zvokubhajisa zvaifanira kupedzerwa naSeptember 16. Kugamuchirwa kwekambani yevashandi vevashanu vanodiwa kuti chibvumirano chigadziriswe.
Kukunda kwekupedzisira kwemudare kunopa Inter Miami imwe nzira kana chibvumirano chesaiti cheMelreese chisati chasvika, asi zvichave zvakakodzera kuita zvakakurumidza. Maererano neMiami Herald, Inter Miami ine vhiki yekuita kuti inotevera ibhadzwe mari ye901 500 US mumunda, yakawedzerwa kunonoka apo nharo neMatheson ichiri kuenderera mberi.
Inter Miami FC ichangobva kubvumirwa kutanga huvakwa hwenhandare ku Fort. Lauderdale inoshumira sechigaro chenguva pfupi kwechikwata kwemakore maviri. Nzvimbo iyi, inofanira kuvakwa paItalyhart Stadium site, ichangobva kupona nedare remhosva. Nhandare yacho inofanira kupedziswa munguva ye2020's MLS season, kutambira kweMic Miami kokutanga mumutemo.
Nyaya iyi yakatanga kutanga (muChirungu) http://espn.com/soccer/major-league-soccer/story/3856010/beckham-group-gets-stadium-boost-in-court
2019 (F) Kugadzirira Munyika: Spain inoruramisa Cameroon ku friendly 4-0
KUNA 2019: Greens pachiitiko muDhaha munaJune 8